Burmese new year in Singapore | MoeMaKa Burmese News & Media
မနက်ဖြန်ကာ စနေနေ့ဗျာ-
ကျနော်တို့ စင်္ကာပူက စံပါဝမ် မှာတော့ သင်္ကြန်ကျအုံးမယ်ဗျို့ -
အက အလှ ပသာဒ များ နဲ့စုံလင်တဲ့ မြန်မာသင်္ကြန် ပွဲတော်သို့ မပျက် မကွက် ကြွလှမ်းခဲ့ကြပါရန် ညီအကို
မောင်နှမများ အားလုံး ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်……..
မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် ပွဲတော်
· Independent Music Group က မြန်မာ သင်္ကြန်တေးများဖြင့် ဖျော်ဖြေပါမည်……
· မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် အက ပဒေသာများနှင့် တေးသံသာများကို ကြည့်ရှု နားဆင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနိုင်ပါသည်……..
အချိန်…… ဧပြီလ -၂၈ရက် -၂၀၁၂ စနေနေ့
(ညနေချမ်း ဆည်းဆာ ၄ နာရီ မှ ၉ နာရီ ထိ )
နေရာ…….Mini Park, Blk 341 Sembawang Close, Opposite Sembawang Interchange
5 mins walk from Sembawang MRT….
ကချင်တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ အက
(၁) ကြက်သား ပလာတာ
(၂) ရွှေတောင် ခေါက်ဆွဲ
(၃) ဆီထမင်း ဗာလချောင်
(၄) မြန်မာ လက်ဘက်ရည် အချို
ကြွရောက် အားပေးကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်…….။
LIVE MUSIC BY INDEPENDENT MUSIC GROUP
SONG LIST ( DRAFT)
(၄) တူးပို့ တူးပို့
(၉) နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခြင်း
(၁၃) နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်သမျှ
(၁၉) အိမ်မက် စေတမန်
(၃၀) မန်းတောင်ရိပ်ခို (မြနန္ဒာ)
(၃၁) အာရှသူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
(၄၂) ယောင်ပေစူး (ရောင်ပေစူး)
(၄၅) ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး
(၄၈) မမောတမ်း ကစေချင်
(၅၁) အရိုင်းသဘင်သည်မလေး နှင်းဆီ
(၅၅) သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင်
သီချင်း ၈၀ ကျော် ဆိုကြ တီးကြမှာပါ။
စတုဒီသာ ကလေးစားရင်း သင်္ကြန်အက ကလေးတွေကိုလာလောက်ကြည့်ရင်း နှစ်သစ်ကိုထပ်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်ဗျာ-
လေးစားစွာဖြင့် အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား
မူရင်း – ဂျစ်တူး(မုံရွာ)Facebook
One Response to Burmese new year in Singapore
Kml on April 27, 2012 at 2:12 pm
We are too far to come, Please up load in youtube or your own facebook. I want to enjoy in there.
May you enjoy your Thingyan closer than me and nearer weather than us. In USA still cold and rain.
May you have happy newyear and good expectation of real democracy.
May Daw Su be healthy and good luck.